Gamtaan Waraana Arabaa lola Yaman keessatti geggeessaa jiru yeroodhaaf dhaabuu beeksise - NuuralHudaa
Gamtaan Waraana Arabaa lola Yaman keessatti geggeessaa jiru yeroodhaaf dhaabuu beeksise
Gamtaan Waraana Arabaa Sa’uudii fi Emreetiin hogganamu, duula waraanaa Yaman keessatti finciltoota Huusii irratti raawwataa jiru torbaan lamaaf addaan kutuu beeksise. Dubbii himaa waraana gamtichaa Koloneel Turki Almaliki eeruun ejensiin odeeyfannoo Sa’uudii akka gabaasetti, gamtichi addatti dhukaasa dhaabuuf kan murteesse, dhibeen Vayirasii Koroonaa Yaman keessatti babal’ataa jiraatuu hin oolu shakkii jedhuun wal qabatee, to’annoo tamsa’ina Vayirasichaatiif haala mijeessuuf tahuu beeksise.
Dabalataanis gareen Huusii waamicha UN fudhatee dhukaasa dhaabuun, gara mariiitti akka dhufu gamtaan waraana Arabaa gama isaatiin qophii tahuu mirkaneessuuf kan yaadame akka tahes ibsame. Haata’u malee gareen Huusii hanga ammaatti yaamicha kana ilaalchisee wanti jedhe hin jiru.
Barreessaan Ol’aanaan Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii Antoniyoo Gutaarees torbee dabre, guutuu addunyaa keessatti, keessumattuu Yaman, Suuriyaa fi Liibiyaa keessatti gareewwan lola irra jiran dhukaasa dhaabuun, weerara dhibee Vayirasii Koroonaa ittisuuf carraaqqii godhamu akka deeggaran gaafatee ture.
Odeeyfannoo birootiin ammoo miseensonni maatii Hoggantoota Sa’uudii 150 ta’an Vayirasii koroonaatiin qabamuu gaazexaan New York Times gabaase. Akka gabaasa kanaatti, qondaaltota ol’aanoo Vayirasichaan qabaman jidduu Bulchaan Riyaad Faysal Bin Bandar Bin Abdul’aziiz keessatti argama. Kanuma hordofuun mootummaan biyyattii, Hospitaalli beekamaan Malik Faysaliin moggaafame, kana booda dhukkubsattoota biroo akka hin keessummeessineefi, Haakimoota cicciimoo biyyattii keessatti argaman garasitti fiduun akka of qopheessu Kiibxata dabre ajaja baasuu ibsame.
Tamsa’ina Vayirasichaatiin walqabatee of-eeggannoof jecha, Malik Salman Masaraa naannawa magaalaa Jiddaa qarqara galaana Diimaatti argamu keessatti kophatti hordoffiin kan godhamaafii jiru tahuu gabaasichi ni addeessa. Haluma walfakkaatuun dhaaltuun gonfoo Muhammad Bin Salmaan fi Ministeeronni biyyatti naannawa iddoola Galaana Diimaa takka keessatti kophaa bahuun akka jiran odeeyfannoon ni addeessa.
September 27, 2021 sa;aa 9:31 pm Update tahe